Mamwe Marches - World March
musha » Mamwe Marches
2nd World Kurume 2018-2019
Kubva Gumiguru 2, 2018 kusvika Kurume 8, 2019
Pano unogona kutenga bhuku re2nd Nyika yaKurume
Kubva ku16 kubva munaSeptember kusvika ku13 kubva munaOctober
La South American March for Peace and Nonviolence (MS) akatarisa zvinopfuura makiromita 11.500 mumazuva 28 per Venezuela, Korombiya, Ekwadho, Peru, Bolivia, Suriname, Brazil, Argentina y Chile
Chiito chacho chakasimudzirwa nevakadzi vatsigiri vesangano "Nyika isina Hondo uye Chisimba"Chitsauko cheEcuador uyo akapinda muCentral American March ye2017 sevatariri vemarudzi ose.
Boka duku iroro raive richibatanidza nevashandi vanobva mune mamwe maguta ari Bogotá, Lima, Santiago, Sucre, Córdoba, Sao Paulo uye zvishoma nezvishoma mambure akaumbwa, kwete pasina matambudziko, uye nzira, zviitiko, hurukuro uye zvakare boka revatori vechikamu mukati base team izvo zvaizoita rwendo rwose. Gare gare, vanhu vakawanda, vagadziri vezvakatipoteredza, varwi vanoita zvematongerwo enyika nevasina simba vanobatana, pamwe chete nemasangano, masayunivhesiti, zvikoro, masunharaunda uye vanhu vanobva kunyika dzakasiyana, izvo, pamwe chete, zvakaitwa musi waMarch.
Makumi makumi matanhatu anoshingaira kubva Pacific Corridor, pakati pevaya vakafamba vaColombia vana vakaita rwendo rwakakwana, vakatendeuka kuSantiago deChile nevaya vakabva Atlantic Corridor mune imwe nzvimbo yekupedzisira yaMarch yakafamba nzvimbo makumi mana nhatu, pakati pemaguta uye masunharaunda, apo zviitiko zvakawanda zvakasimudzirwa kukurudzira Rugare uye Kusagadzikana.
Mashoko akazara anogona kuonekwa paWEB
Iwe unogona kuona kana kutora bhuku reSouth America March mahasa.
Central America March 2017
Kubva ku10 kubva munaSeptember kusvika ku16 kubva munaSeptember
Vavatori vei 1ª Central America Nyaya YeRunyararo uye Kusagadzikana (MC) reVakamhanya makiromita 3.400 mumazuva 7.
Vaiva vazhinji anofamba, zviitiko, kurukurirano, tsika zviitiko uye mazororo dzakaitwa muna 10 nzvimbo, kusanganisira maguta uye makanzuru kuHonduras (Peña Blanca, San Pedro Sula uye San Lorenzo), Guatemala (City uye Mixco), El Salvador (Sonsonate, San Salvador uye San Miguel), Nicaragua (Borders), Panama uye Costa Rica (San José uye Heredia).
Vatengesi vaiva boka revarwi ve74, kunyanya vadzidzi vaduku, asiwo vanhu vakwegura, kusanganisira vana. Panguva yekushanyirwa ivo vaifambidzana neEcuadorian vashandi sevatariri vemarudzi ose.
Nhume dzeCosta Ricans dzakagamuchirwa pamuganhu we Peñas Blancas to the MC achibva Nicaragua. Maawa gare gare 1ª MC yekusagadzikana uye rugare akasvika muguta guru, San José In the Campus Omar Dengo of the National University of Costa Rica (UNA), zvakagamuchirwa nemazana evadzidzi, vashandi uye vakuru vezvidzidzo nea Rector Doctor Alberto Salom kumusoro.
Kusvika kwake kwakazarura Foro and the Yunivhesiti Mazuva "Kuita Kuti Urege Kusvibiswa Uye Rugare" iyo yakaitwa mukati memazuva maviri anotevera, Gunyana 2 na14, 15. Kwaive kupera kwekuyedza kukuru neboka rakasvika rakaneta, kunyanya nekuda kwekunetseka kwakasangana netsika nekuyambuka muganho, uine ongororo dzisingaperi uye nguva refu. kumirira, izvo kazhinji zvakakonzera kunonoka kwezviito zvakarongwa. Zvakasimbiswa kuti dzimwe hurumende mudunhu rino dzinoita kuti zviomere vanhu kufamba vakasununguka.
Chiito chacho chakasimudzirwa nesangano "Nyika Isina Hondo uye isina Chisimba" Central America Chapter uye akaverenga kuburikidza nekushanda kweyunivesiti dzakawanda, masangano uye masangano.
Bhuku reCentral American March rinogona kuonekwa kana kushandiswa pano nekuda kwehwaro.
Kubva ku2 yaOctober kubva ku2009 kusvika ku2 yaJanuary ye2010
Bhuku re 1ª World March rinogona kuonekwa paIndaneti pano